Ukuphupha izixhobo Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Izixhobo zasekhaya okanye ezasendlini zizixhobo zoomatshini okanye zombane eziqhelekileyo ezisetyenziswa kwikhaya labucala. Uluhlu lwezixhobo zasekhaya lubanzi kakhulu.
Oku kubandakanya izinto ezininzi zasekhitshini, ezinje ngesitovu okanye ishawawashi, kunye nezixhobo ezincinci, ezinje ngomenzi wekofu, itoaster, umxube, okanye isixhobo sekhitshi. Kodwa ukucoca okanye izixhobo zokhathalelo lomntu njengesixhobo sokomisa iinwele nazo zibandakanyiwe. Nokuba i-screwdriver engenantambo sisixhobo sendlu.
Iphupha lezixhobo zasekhaya zinokuchazwa ngokulula kakhulu kwindawo yokuqala. Kuba edibana nezinto ezinjalo kwaye ezisebenzisa yonke imihla, ayimangalisi into yokuba zikwanakho ukufikelela kwinqanaba lethu lokulala. Ke ngoko, unxibelelwano oluthe ngqo phakathi kwephupha kunye nenyani inokusekwa.
Kodwa kuthetha ntoni ukuba akunjalo? Ke myalezo mni oqulathe iphupha elinje?
1 Uphawu lwephupha «izixhobo zekhaya» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «izixhobo zekhaya» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «izixhobo zekhaya» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «izixhobo zekhaya» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwephupha lesixhobo, isimo sakho sengqondo kwinto leyo edlala indima ebalulekileyo. Ukuba amava okwenyani ngesixhobo eso alungile, iphupha elo linokuchazwa kweli cala. Isimo sengqondo esibi, umzekelo kumatshini wokucoca, senza umyalezo wephupha ube mibi kakhulu.
Ngokubanzi, uphawu lwephupha "izixhobo zasekhaya" zinokubhekisa kwi ukuphuculwa iimeko zangoku zokuphila. Isixhobo esisebenza kakuhle ekhaya ephupheni sinokubonisa ukuqhubela phambili kwezentlalo kunye nokufumana imali. Nangona kunjalo, ukuba isixhobo sinesiphene ngelixa silele, utshintsho ku el mundo Ukuvuka akuyi kuba kuhle.
Kuba izixhobo ezininzi ezahlukeneyo zinokufumaneka ekhayeni kwaye ke zinokubonakala kwinqanaba lokulala, kuphela zizinto ezibaluleke kakhulu okanye eziqhelekileyo ekhaya xa ulele ziya kuxoxwa ngeli nqanaba. Ulwazi olunokwenzeka ngakumbi lunokubonwa ngqo kwisimboli yesixhobo sokulala ngokufanelekileyo.
Isitovu / isitovu - Ukuba kushushu ephupheni, kunokubonwa njengophawu lobushushu kunye nokhuseleko. I-oveni ebandayo efana nephupha ibonisa ukulangazelela uthando lomzwelo,
Ifriji-luphawu lwamandla okuphupha okuzikhusela,
Umatshini wokuhlamba impahla: ubonakalisa umnqweno wokucoceka ngokomoya; kodwa inokubonisa ukukruquka,
Zokusika: Ifolokhwe ibonisa ukungakhuseleki kunye nokuphikisana kwangaphakathi; icephe luphawu oluqinisekileyo kwaye lubonisa ukwamkelwa komphuphi; imela ephupheni ihlala ifanekisela umsindo kunye nobundlongondlongo,
Isikere: ifuna ingqwalaselo enkulu kwizinto ezibalulekileyo zobomi,
Isicoci sokucoca - siza nentuthuko engathandekiyo kunye nobunzima kungekudala.
Uphawu lwephupha «izixhobo zekhaya» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, uphawu lwephupha "izixhobo zasekhaya" zihambelana kakhulu nemifanekiso yamaphupha "ikhaya" kunye "nendlu." Kungenxa yoko le nto uphawu lwesixhobo sendlu ephupheni emva koko lubonisa ithemba lomntu ophuphayo. ukhuseleko kubonwe kokubini kwizinto ezibonakalayo kunye neemvakalelo.
Ikwadlala indima ebalulekileyo kutoliko lwengqondo lomfanekiso wephupha, sisixhobo esibonwayo ephupheni. Kungenxa yokuba ulwazi lokuthatha isigqibo lunokufumaneka koku. Zokusika njengezixhobo zasendlini ephupheni okanye iinxalenye zazo zihlala zisetyenziswa njengophawu lwe ukutya kokomoya Iyaqondakala.
Ukuba umntu ophuphayo wophula isixhobo xa elele, ufumana isalathiso sakhe, ngokwendlela etolikwa ngayo iphupha elo. Ubudlelwane kwabanye abantu. Kuba umntu oleleyo kufuneka alumke kule ndawo ukuze angonzakalisi nabani na obalulekileyo kuye ngenxa yokungahoywa. Ukuba isixhobo esinjalo siyalungiswa ephupheni, oku kuhlala kubonisa inkqubela phambili elungileyo.
Iikalika zelime kwizixhobo ezinamanzi, ezinje ngomatshini wokuhlamba impahla okanye isitya sokuhlambela izitya, zinokuba liphupha elinamaxesha anzima.
Uphawu lwephupha «izixhobo zekhaya» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elingaphaya kokuchazwa kwephupha, uphawu "lwezixhobo zasendlini" luqondwa njengophawu lokuba umphuphi uncedo lokomoya okanye ufuna uncedo.